शनिवार गर्नुहोस् यी कार्यहरू हुनेछ असाध्यै फलिफाप ! – Sandesh munch
शनिवार गर्नुहोस् यी कार्यहरू हुनेछ असाध्यै फलिफाप !
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत्र १३, २०७७ समय: ९:३४:३३
काठमाडौं-विज्ञानको जति नै विकास भएपनि अझै पनि मानिसहरु धर्मशास्त्रलाई पनि उत्तिकै मान्ने गरेका छन् । यदी धर्मशास्त्र मान्नेहरुकाल लागि यहाँ शनिबार केही चिजहरु खान नहुनेबारेमा जानकारी दिन खोजिएको हो । जुन खाँदा शनिदेव रिसाउने धार्मिक विश्वास छ ।
शनिदेवलाई खुसी बनाउन चाहनु हुन्छ बने शनिबार खाने कुरामा सावधानी अपनाउनु पर्छ। धर्मशास्त्रको अनुसार शनिबार यी खानेकुरा खाँदा शनि बेखुसी हुने बताइन्छ।
धर्मशास्त्रअनुसार सादा दुध वा दहिको सेवन शनिबार राम्रो मानिँदैन। तर दुधमा मह वा चिनी मिसाएर भने खान सकिन्छ। काँचो आपको अचार खान बाट बच्नुहोस्। रातो खुर्सानीको प्रयोग शनिबारको दिन नगर्न बताइन्छ। माछा मासु पनि शनिबार नखादाँनै राम्रो मानिन्छ। अझ शनिको दशा चलेको बेलामा माछा मासुमा विशेष ध्यानपुर्योउनु पर्नेहुन्छ।
शनिबार रक्सी सेवन गर्नाले शनि राम्रो भएको बेलामा पनि अशुभ फल मिल्छ। दुर्घटनाको आंशका बढ्ने हुन्छ। शनिबारको दिन चना र मासको दाल खान सकिन्छ तर मसुरोको दाल भने नखादाँ नै राम्रो हुन्छ।
काठमाडौं / आज नेपालबाट देखिने गरी खण्डग्रास सूर्य ग्रहण दुई नक्षत्रलाई समेट्दै मिथुन राशिमा लाग्दैछ । आइतबार बिहान १० बजेर ५० मिनेटबाट सुरु हुने उक्त ग्रहण मध्याह्न १२ बजेर ३८ मिनेटमा मध्यम अवस्थामा रहनेछ । अपराह्न २ बजेर २३ मिनेटमा पूर्णरुपमा ग्रहणले छोड्ने छ ।
ग्रहणलाई धार्मिक र वैज्ञानिक रूपबाट अशुभ मानिन्छ । विज्ञानले सूर्य ग्रहणलाई नांगो आखाँले हेर्न बर्जित गरीएको छ भने धार्मिक दृष्टिमा पनि ग्रहणकालमा केहि कामहरु गर्न बर्जित गरीएको छ । ग्रहणका बेला गर्न नहुने कार्य र गर्नुपर्ने कार्यका बारेमा केहि जानकारी दिदैंछौ :
सूर्य ग्रहणको सूतक काल
ग्रहणकाे सुतक काल भनेर भनिएको छ । सुतक सू्र्य ग्रहण लाग्नुभन्दा १२ घण्टा अगाडिदेखि नै सुरु हुने उल्लेख गरिएको छ। ग्रहणको प्रभाव कम गर्नका लागि घरमा भएका पानीका भाडाहरुमा कुश राख्ने तथा गाईको गोबरले घर घेर्ने परम्परा पनि सदीयौंदेखि रहिआएको छ । गाईको गोबरमा हानिकारक व्याक्टेरियालाई निष्कृय पार्न सक्ने शक्ति रहेको वैज्ञानिकबाटै पुष्ठि भैसकेको छ ।
सूतक बार्नुपर्ने कारण
ग्रहण लागेको बेला गर्न नहुने कार्य